आज नायिका आँचल शर्माको जन्मदिन, कतिमा लागिन् त ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारआज नायिका आँचल शर्माको जन्मदिन, कतिमा लागिन् त ?
आज नायिका आँचल शर्माको जन्मदिन, कतिमा लागिन् त ?
काठमाडौं– नायिका आँचल शर्माको आज जन्मदिन हो ।१८ मार्च १९९५ मा उनको जन्म काठमाडौंमा भएको हो । आजदेखी उनि २५ पार गरी २६ मा टेकेकी छन । काठमाडौं इन्टरनेसनल कलेजमा स्कुल पढाइ पूरा गरेकी आँचल अभिनेत्री, मोडल र भिजे पनि हुन् ।